Recipe Roast nge goose giblets
Indlu yasekhaya Ukupheka Okunye Izithako Imikhiqizo I-Offal
Ukugcoba ekhaya I-Roast ekhaya ivame ukulungiswa kusuka kwenkomo yenkomo noma yengulube ngokufaka amazambane, anyanisi, izaqathe. Ngiphakamisa ukuthi ngiyilungiselele nge-addition of giblets ye-goose - ngokuvamile ekuthengeni izinkukhu ezimakethe kunezinhlasi ezizosiza kule recipe. Isidlo siphume kakhulu, sicebile, ngempela, ekhaya. Kuhle ukukhonza ngesidlo sasemini, kubonakala ukuhlanganisa kokubili kokuqala nesesibili.
I-goose giblets ngamafutha 150 g
Isinkwa 2 sosawoti
Uxube lwe-hops-suneli 1 i-pinch
I-Bay leaf 2 ama-pcs.
Ama-anyanisi ahlaza okwesithathu 0.5
Ukhula, ukolweni 20 g
I-anyanisi 60 g
Amazambane 300 g
Inkukhu ye-inkukhu 50g
Inyosi inyama 50g
Isinyathelo 1 Ukulungisa isidlo udinga ukuthatha umquba wenkomo nenkukhu, i-goose giblets (inhliziyo, isisu, isibindi) ngamafutha, anyanisi, izaqathe, amazambane, ufulawa, imifino, ama-hops-suneli, amaqabunga e-bay.
Isinyathelo 2 Imikhiqizo yezinyama ihlanza kahle emanzini abandayo bese uqhafaza kahle.
Isinyathelo 3 I-Goose fat iqoshiwe futhi ifakwa e-cauldron.
Isinyathelo 4 Phuza amafutha, uma kungenjalo, bese ufaka amafutha emifino.
Isinyathelo 5 Lapho amafutha encibilika, ama-cracklings asuswa, kanti inyama nama-giblets zifakwe kahle.
Isinyathelo 6 Grate izaqathe kwi grater enkulu, nquma anyanisi fake.
Isinyathelo 7 Yengeza anyanisi oqoshiwe inyama ethosiwe.
Isinyathelo 8 Gqugquzela kahle ukwenza i-anyanisi icace.
Isinyathelo 9 Engeza isanqante eshisiwe.
Isinyathelo 10 Hlanganisa konke kahle. Usawoti, engeza ama-hops-suneli. Qhubeka ukugaya.
Isinyathelo 11 Gwema amazambane, hlambulula futhi usike amazambane amaqhafuqhafu, bese uphinde ubeke isigamu futhi uthathe izingcezu ezinkulu.
Isinyathelo 12 Yengeza amazambane emifino egosiwe nenyama.
Isinyathelo 13 Gqugquzela kahle.
Isinyathelo 14 Fafaza ngendlala encane yefulawa.
Isinyathelo 15 Hlanganisa ngokushesha, ukuze ufulawa usatshalaliswe ngendlela efanayo futhi akukho okwakhiqizwayo.
Isinyathelo 16 Engeza amanzi, mhlawumbe ashisayo - ukuze imikhiqizo yenyama ingabi lukhuni, ulethe ngamathumba, unciphise ukushisa okungenani futhi ubambe phansi ngaphansi kwesibindi semfudumalo ophansi kuze kube yilapho amazambane ekulungele (cishe imizuzu engama-40).
Isinyathelo 17 imizuzu eyishumi ngaphambi kokulungele ukwengeza iqabunga le-bay ku-cauldron.
Isinyathelo 18 Gcoba isidlo esilungisiwe ngemifino.
Izimbiza ezinezinkukhu kanye nemifino
Amapancake anezela kwesibindi
Ubuningi bomunyu ngamantongomane
Indlela yokugeza izingubo zezingane?
Ukushayela ngezinyosi kanye nobhiya
Ukuhlomula okuzimelayo ekhaya
Rollatini kusuka isitshalo seqanda nge ushizi
I-Horoscope ngo-Okthoba 2017 - amawele-amawele-uTamara Globa no-Angela Pearl
Isobho Sokukhanyisa Ushizi - isitsha esihle kakhulu sokudla kwasemini nesidlo sakusihlwa
Izindawo zokwelapha zamafutha abalulekile
Ingabe ngidinga ukuba ngifake ingane?